ဒီနေ့ ကတော့ စစချင်း ကျူရှူး ရဲ့ အိမ် ၀င်ပေါက် လို့ ခေါ် ဆို တဲ့ ဖုခုအိုက မြို့ ကနေ ခရီး စပါမယ်။ ဖုခုအိုက ဟာ ကျူရှူးပြည်နယ် ရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ မြို့ ကြီး တစ် မြို့ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ အခု တစ်ခေါက် ခရီး...
ဒီတစ်ခါမှာ တော့ ၊ ဂျပန်နိုင် ငံ အလှ ဆုံး ၃ ခု ၀င် ညပိုင်း အလှ တွေ ထဲ က တစ် ခု ဖြစ် တဲ့ စာရာခူရာ တောင် ကို သွား ခဲ့ ပါတယ်။ ကျနော် က အရင် က ညပိုင်း အလှတွေ ဘာတွေ စိတ် မ၀င်စား ခဲ့ ပေမယ့် ရောက် သွ...
Updated: 2016-07-12 15:15
အိဇုမို့တိုင်းရှ နတ်ဘုရားကျောင်း ( ဖူစာရေး နှင့် ရေစက်ဆုံ ရာ နတ်ဘုရား)
ရှိမနဲ ခရိုင် အိဇုမို တိုင်းရှ နတ် ဘုရား ကျောင်း ။ခရူးရှူး ပြည်နယ် တွင်း နာဂစခိခရိုင် နဲ့ ဒီ နေရာ နှစ် နေရာ သာရှိသောဖူစာရေး နဲ့ ရေစက် ဆုံ ရာ နတ် ဘု ရား ဆို ပြီး ကိုး ကွယ် ယုံ ကြည် ကျပြီး နှစ...
Updated: 2016-07-11 16:45
ခုရော့ရ ဆုခိရာခိ ဟော့ပေါ့ စားသောက်ဆိုင်
ဆုခိရာခိ ဟော့ပေါ့ ထဲ ကိုခရမ်းချဉ် သီး ထည့် စား တာ ကတော့ တစ်ကယ် ကိုကောင်းပါတယ်။ နောက် ဆုံး ပိတ် လေး ကို ထမင်းလေး ထည့် ပြီး စား ရင် ဆွေမျိုးတောင်မေ့ သွားနိုင်ပါတယ်။
Updated: 2016-07-11 16:02
180 Years of Traditional Taste: Hirokyukuzu နှစ်ပေါင်း ၁၈၀ ကျော် ရှိတဲ့ အရသာ ၊ဟီရော့ခရူးခုဇု
၁၈၁၉ ခု နှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ ပြီး ပြည်တွင်းဖြစ် စားသောက် ကုန် တို့ ကို သာ အသုံး ပြု တဲ့ ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင့်အရင် တုန်း က နန်းတွင်း က မင်းမျိုမင်းနွယ် တွေ အတွက် ဟင်းပွဲ တော် ချက် ပြုတ်ပေး ခ...
Updated: 2016-07-07 14:54
မန်းဒရာခဲ ဖူခုအိုးက ဆိုင်ခွဲ ( မန်းဂ ၊ ကာတွန်း ၊အန်းနီးမဲ)
ဂျပန် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းမှာတင် မကပဲ ကမ္ဘာမှာတောင် နာမည် ကြီး တဲ့ ကားတွန်း ၊မန်းဂ နဲ့ အန်းနီးမဲ တို့ နဲ့ ပက် သက် တဲ့ ကုန်တိုက် ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ နာဂနို ရပ်ကွက် မှာ ပင်မ အရောင်းကု...